Paroasy Fo Masin’i Jesoa sy sekoly Fo Madion’i Maria samy hankalaza ny faha 10 taona - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
3%. Raha ny fanazavan’i Mompera Lemainty dia tsisy afa-tsy 3% eo ho eo ny tahan’ny katolika ao amin’ny tananan’i Port-Bergé. Ary raha ny mpiangona eo amin’ny paroasy Fo Masin’i Jesoa sahaniny dia mahatratra eo amin’ny 600 eo ho eo. Misy lamesa roa isan’alahady amin’ny 6 ora maraina sy amin’ny 9 ora. Izy no curé faharoa mitantana ny paroasy. Ary pretra Malagasy hatrany no nitantana ity paroasy.
Misy fiantraikany amin’ny fandraisana sakramenta izany fahavitsian’ny kristianina izany. Eo amin’ny 5 isan-taona eo ny mariazy tontosaina eo amin’ny paroasy. Miezaka hatrany ny diosezy mandrisika ny ray amandreny mitondra ny zanany hatao batemy. Misy 100 ny salan’isan’ireo zaza hatao batemy isan-taona. Misy 70 ny ankizy mandray ny komonio voalohany isan-taona (TTF : marihina hatrany fa tsy ny fandraisana ny komonio voalohany no maha sakramenta ny eokarisitia, fanamarihana ihany ny fandraisana ny komonio voalohany fa mitoetra ho sakramenta mandrakizay ny eokaristia na impiry no nandraisana azy teo amin’ny fiainan’ny olona iray), 40 sisa no mahatozo eo amin’ny fandraisana ny sakramentan’ny Fankaherezana.
Raha tsisy afa-tsy 3%n’ny mponina no hany kristianina dia mitory izany fa misy ezaka lehibe miandry an’ireo nandray batemy rehetra fa indrindra ny pretra. “Tena mbola vitsy izahay pretra ato anatin’ny diosezy. Noho izany ny pretra iray dia voatery isahana asa maro. Ny tenako izao dia ankoatra ny maha-curé ahy dia misahana ny tanora, miandraikitra ny Ftmtk, mampihodina ferme iray..." hoy mompera Lemainty. Roa ny pretra eo amin’ny paroasy Fo Masin’i Jesoa. Miara-miasa aminy ao i Mompera Rasoanaivo Nicolas Appolinaire.
Mandalo vanin’andro lehibe manokana ny paroasin’ny Fo Masin’i Jesoa amin’ity taona ity. Feno 10 taona ity paroasy ity ary hisy hateloana hatokana hanamarihana io faha 10 taona io. Hosokafana ny 17 jona izao ny lanonana ary haharitra hatramin’ny 19 jona izany.
Raha ho an’ny fiangonana manokana dia hisy telo ny marika mipetraka ho fahatsiarovana ny faha 10 taona. Ho tokanana amin’io ny lakolosy elekitronika izay efa miasa ankehitriny ary mitaona ny olona hamonjy lamesa rehefa maraina. “Tsy nanana lakolosy ny fiangonana hatramin’izay. Ny tsara marihana dia mandeha amin’ny herin’ny masoandro (énergie solaire) ity lakolosy elekitronika ity” hoy Mompera Lemainty. Ny ezaka faharoa dia ny fandokoana manontolo ny trano fiangonana.
Tsy manao fety irery kosa anefa ny fiangonana mandritra io hateloana io. “Mankalaza ny faha 10 taonany koa ny sekoly Fo Madion’i Maria eto Mahasalama izay misy mpianatra eo amin’ny 300 eo ho eo manomboka amin’ny préscolaire hatramin’ny classe de septième. Ny azy ireo indray dia fitokanana ny foibe itoeran’ireo masera CIM miasa eto no hotontosaina ao anatin’ny hateloam-piravoana” hoy Mompera Lemainty. Amin’izao fotoana izao dia trano lova tamin’ireny lazaret ireny no ipetrahan’ireo masera mitantana ny sekoly. Ry zareo masera avy amin’ny fikambanana CIM (Cœur Immaculée de Marie) izao hitotorebika izao.
Araka ny filazan’i Mompera Lemainty dia isan’ny olana sedrain’ireo mpitantana sekoly ny mahita zazavavy ao amin’ny kilasy faha 6 na faha 7 na faha 8 dia efa bevohoka ary voatery miala andaharana.
Be ny asa miandry an’ireo pretra ao amin’ny diosezy. Misy ireo fikambanan-drelijiozy manampy. Ao ny Spiritains, ny Saletin (2014), ny Capucin (2015). Mety hanampy tosika ny Lazariste (2016).
Raha ireo miomana kosa dia misy 21 ireo ao amin’ny Seminera zandriny. Misy 11 ireo any amin’ny Seminera Zokiny, 3 no manao Régence ary 2 Théologie.
Raha ho an’ny diosezy manokana dia miomana hanao fety lehibe amin’ny fitokanana ny tranon’ny Seminera Zandriny nomenara anarana hoe Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Ny voalohan’ny volana okitobra 2016 no hanaovana ny fitokanana. Tsiahivina fa tany Mandritsara no nisy ny seminera zandriny ary izao izy hafindra ao Boriziny izao, izay ivon’ny diosezy.
Mompera Lemainty no curé faharoa. Nahavita dimy taona izy raha dimy taona koa ny teo alohany. Midika ve izany fa efa ho soloina koa izy ? Tsisy firesahana ny amin’izany fa mbola ny hafaliany manomana ny jobily no hita soritra eo aminy.